China Dyara katsi marara Kugadzira uye Fekitori | Bondhot
tofu katsi marara
2mm tofu katsi marara
3m tofu katsi marara
yakaputswa tofu katsi marara
puppy yekudzidzisa mapadhi
Natural katsi marara
Dyara katsi marara
Puppy traing mapedhi
Anoraswa machira emachira
Manapukeni emhuka dzinovaraidza
Tofu katsi Litter inogadzirwa nechikafu chegiredhi zvinhu, bhinzi madhiri senge chinhu chikuru, chakasanganiswa nechibage starch, chakaumbwa mukoramu, shoma track uye tsoka yakanaka inonzwa chipfuyo.
Iyo yakachena kuravira kwekunatsa deodorization, isina-toxin, isina guruva, kukurumidza kufema, inonamira nekukurumidza uye yakaoma, yakadhonzwa uye yekutsvaira muchimbuzi uye kusungunuka mukati memasekondi gumi nemashanu, pasina basa rekurasa marara. Rudzi rwemagadzirirwo matsva ane hushamwari katsi marara mazuva ano.
Chigadzirwa Chigadzirwa Eco-inoshamwaridzika Soy Cat Litter MugadziriTofu Kitty Litter Multi Scents Chekutanga, Apple, Lemon, Lavender, Green Tea kana Yakagadzirirwa
Brand OEM Main Zvinongedzo Pea masara, Soy furawa, Cornflour, Guar Gum
Kushandisa Cat Toliet Chimiro Granule & Solid & Colimnar & Strip
Dhayamita 2mm Kureba 4-12 mm
SGS bvunzo Kwete Formaldehyde & Aspergillus Flavus & Bacteria & Heavy Metal Yakawanikwa, Pamuromo Kuedzwa Isiri-Inotyisa Zvimiro Easy Scooping, Inokurumidza Agglomeration, Natural Biodegradable, Flushable, Hypoallergenic, Ultra Kunhuhwirira Kudzora
Kuwandisa 0.65 - 0.7g / ml Kusvinwa Kwemvura > 600%
Kumanikidzwa Nemishonga (g) > 400g Nzvimbo yeKutanga Shandong Dunhu, China
Chakaita zvokugadzirwa yokuvirisa Kwete Kusanganisira Makemikari Kwete Kusanganisira
Kubatsira Yakanyanya Kubata, Super Deodorization Yakakodzera Cat Litter bhokisi Imwe chete nhete Cat Litter bhokisi
Nguva yekuendesa Mazuva gumi nematanhatu eChiratidzo chedu; Mazuva makumi maviri nemakumi matatu eOEM & ODM HS Code 23031000
Bhegi Rudzi 6L kana 7L uye 18L kana customized Pasuru Bhegi + Yemukati Bhokisi + Master Carton
Q1: Iwe uri fekitori kana kambani yekutengesa?
A: Isu tiri iyo yakananga fekitori uye isu tinogona kutumira kunze isu pachedu.
Q2: Ndeapi masimba aunayo?
A: Tine zvakawanda zvekurasira ruzivo; Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro; Sustainable uye nharaunda zvine hushamwari zvinhu; Yemakwikwi fekitori mutengo; Strict mhando cheki mashandiro; Anofungisisa mushure-kutengesa masevhisi.
Q3: Ndinogona here kuwana muyenzaniso, uye ndeye mahara?
A: Muenzaniso wekubhadhara uchadzorerwa kwauri kana iwe ukaisa hodha huru.
Q4: Ndihwo hushoma huwandu uye inotungamira nguva yemasampidhi inogona kutaurirana?
A: Hongu. Uwandu pazasi yakaderera MOQ inogona kutaurika pasi pemamwe mamiriro; Isu tingangodawo inguva yakati rebei kutungamira nguva yemasampuli akakosha. Ndokumbira utizivise kutsanangurwa kwako uye kunetseka, uye isu tichaedza kuuya nemhinduro dzakakodzera.
Q5: Ndeipi nzira yekutumira?
A: Zvinoenderana nezvaunoda, vatapi vakasiyana vekutumira vanogona kusarudzwa, senge FEDEX, DHL, TNT zvichingodaro; nemhepo kana gungwa. Mari yekutumira zvinoenderana nenzira dzekutakura, huremu hwechigadzirwa uye huwandu, uye nzvimbo yenzvimbo yako. Mushure mekuendesa zvinhu, isu tinokutumira iwe iyo yekutevera nhamba nekukasira, kuti iwe ugone kuteedzera nhumbi dzako munguva.
Q6: Ndeipi nguva yekutendeuka?
A: Zvinhu zvedu zvinowanzoendesa mumazuva 7-14. Kunonoka kunogona kuitika nekuda kwemamiriro asingatarisirwe.
Q7: Ndeipi nzira yekubhadhara?
A: Isu tinotsigira inoshanduka nzira dzekubhadhara, zvirinani neT / T.
Q8: Tinogona here kudhinda yedu yechangu kana logo pane zvigadzirwa zvako?
A: Ndizvozvo. Zvichava zvedu mufaro kuva wako waunofarira ODM uye OEM mugadziri mu China.
Q9: Nei zvimwe zvinhu zvine musiyano pakati pemawebhusaiti foto uye nezvinhu zvinoshanda?
A: Nekuda kwemusiyano wechiedza uye mabhurawuza pazvikwangwani, mafoto ndeereferenzi chete. Pakati pemabatch akasiyana, zvinhu zvinogona zvakare kuve zvakati siyanei.
Pashure: Puppy mapedhi
Zvadaro: kati jecha
Adress: 655 Guoda Road, Zhaoyuan Guta, Shandong Province, China 265400